पुरातत्वविद् - यो ... व्यवसाय archeologist। Archeologists
उल्लेख पुरातत्व प्राचीन ग्रीस मा सुरु भयो। उदाहरणका लागि, प्लेटो प्राचीन यस अवधि अध्ययन बुझेका र पुनर्जागरण ग्रीस र रोम को इतिहास को अध्ययन चाहनुभएको। विदेशी विज्ञान मा, अवधि शास्त्र संग सम्बन्धित छ। रूसी पुरातत्व - को जीवाश्म सामाग्री अध्ययन गर्ने एक विज्ञान प्राचीन समयमा मानव गतिविधिसँग सम्बन्धित छन्। यो अध्ययन र क्षणमा उत्खनन धेरै वैज्ञानिक क्षेत्रहरू संग cooperates र विभिन्न eras र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सामना धेरै खण्डहरू छन्।
व्यवसाय पुरातत्वविद् - एक बहुमुखी र रोचक काम
मान्छे राम्ररी पृथ्वी formations मा उत्खनन छन् जो रहलपहल, को टाढा विगतका पुनस्थापित, प्राचीन सभ्यताहरु को संस्कृति र जीवन सिक्न। यो काम ठूलो हेरविचार र सावधान आवश्यक छ। समय देखि विगतका रहलपहल थप नाजुक र dilapidated हुन्छन्।
पुरातत्वविद् - नयाँ अनुसन्धान लागि स्रोतहरु को खोज मा उत्खनन मा लगी भएको छ जसले एक व्यक्ति। अक्सर, यो पेशामा पनि गुप्तचर काम संग तुलना गरिएको छ। archaeologists रचनात्मक, ध्यान, कल्पना र अमूर्त सोच माग को काम - विगतमा पुरातन संसारको प्राचीन चित्र पुन: सिर्जना गर्न।
काम पनि प्राचीन ग्रीस र रोममा लोकप्रिय भएको छ। पहिले नै ती समयमा चिनिन्थे स्टोन, कांस्य र फलाम उमेर, धेरै उत्खनन सञ्चालन र पनि अधिक प्राचीन वास्तुकला स्मारक थिए। यस पुनर्जागरण मा, archaeologists को मुख्य लक्ष्य थियो - प्राचीन मूर्तिहरु फेला पार्न। छुट्टै विज्ञान, यो प्रारम्भिक 20 औं शताब्दीमा गठन भएको थियो।
कस्ता गुणहरू गर्नुपर्छ एक पुरातत्वविद्
तपाईं आफ्नो गतिविधिहरु लागि चुनिएको क्षेत्रमा वैज्ञानिकहरू द्वारा संचित धेरै को तथ्य को ज्ञान आवश्यक छ। यो Neolithic हुन सक्छ वा paleolith, चरेस, प्रारम्भिक फलाम Scythian समय प्राचीन स्लाव भाषाहरु-रूसी पुरातत्व, आदि हुन सक्छ सूची पूर्ण छैन, र यो विस्तार गर्न सकिन्छ। पुरातत्वविद् - एक पेशा रोचक छ, तर erudition र वैज्ञानिकहरू विभिन्न स्रोतहरूबाट तुलना गर्न सक्ने क्षमता आवश्यक छ।
यस्तो व्यक्ति एक राय र रक्षा गर्न सक्षम हुनुपर्छ, भावना भन्दा तर्क आधारित तर्क। गाह्रो हुन सक्छ, तर यदि त्यहाँ तिनीहरूलाई खण्डन तथ्यहरु छन् तपाईं आफ्नो hypotheses परित्याग गर्न आवश्यक छ। archaeologists काम महत्त्वपूर्ण गुणहरू आवश्यक - यो धैर्य, लगनशीलता, समयबद्धता छ। को उत्खनन समयमा तिनीहरूले अति आवश्यक छन्।
archaeologists काम अक्सर फरक climatic अवस्थामा भइरहेको उत्खनन संग सम्बन्धित छ हामी, राम्रो शक्ति र शारीरिक फिटनेस आवश्यक छ। प्लस जैविक सामाग्री एलर्जी को अभाव। पुरातत्वविद् - सन्तुलित गर्न छ जो एक व्यक्ति, शान्त सक्षम टोलीमा काम गर्न।
व्यवसायी, आकर्षित गर्न रंग, तस्वीर सक्नेछ। मात्र होइन पुनर्स्थापना, तर पनि धातु, ढुङ्गा, माटो र जैविक सामाग्री (छाला, हड्डी, काठ, कपडा, आदि) को संरक्षण को मूल कुराहरू थाह छ। शास्त्र, भाषा बिज्ञान, Ethnography, geodesy, स्थान वर्णन, भू-र paleozoology को एक व्यापक ज्ञान आवश्यक निश्चित हुनुहोस्। प्राचीन इतिहास अध्ययन गर्नेहरूले archaeologists, इतिहास र सहायक विषयों (पाठ, numismatics, palaeography, sphragistics, विशेष अवसर र अधिक) संग परिचित हुनुपर्छ।
Archaeologists-क्षेत्र कामदारहरूको अर्थशास्त्रियों, राम्रो आयोजकहरु, शिक्षकहरूलाई र मनोवैज्ञानिक हुनुपर्छ। तर सबै भन्दा महत्वपूर्ण - तिनीहरूले "भूमि, हेर्न" आफ्नो तहहरू र interlayer पढ्न र सही प्राचीन को परिणाम तुलना गर्न सक्नेछ।
मान्छे archaeologists आफ्नो रोग, जो expeditions मा प्राप्त छ। अक्सर यो खाना गुणस्तर सिधै निर्भर छ, त्यहाँ खाना पकाउने लागि सामान्य अवस्थाको रूपमा एक gastritis वा गैस्ट्रिक अल्सर छ। rheumatism र sciatica अक्सर archaeologists फरक मौसम अवस्थामा पालमा बाँचिरहेका छौं छ रूपमा साझा पनि हो। यस कारण, त्यहाँ विभिन्न arthrosis र गठिया छन्।
एक पुरातत्वविद् को काम के हो?
को archaeologists के? वैश्विक उत्खनन, तर पनि सही छनौट गर्न र ध्यानपूर्वक एक मा गुना चाहिन्छ भनेर व्यक्तिगत mozaicheskimi टुकडे मात्र छैन। यो अक्सर विगतका रहस्य जवाफ धेरै वर्ष लाग्छ कि हुन्छ। तर अन्तिम परिणाम यो लायक छ। यो कि सधैंभरि ग्रह को bowels लुकेका देखिन्छ विगतको पुन: सिर्जना गर्न सम्भव यसरी भएकोले।
को archaeologists के? तिनीहरूले स्रोतहरू अध्ययन, तिनीहरूलाई विश्लेषण र पछि विभिन्न पहिले नै ज्ञात तथ्य द्वारा complemented। अध्ययन मात्र होइन उत्खनन तर पनि जहाँ काम कलाकृतिहरू र कागजातहरू संग प्रत्यक्ष स्थान लिन्छ डेस्क भाग समावेश गर्नुहोस्। वैज्ञानिकहरू मात्र होइन भूमि मा तर पनि पानी काम गर्न सक्छन्।
सबै भन्दा प्रसिद्ध archaeologists
Genrih Shliman - ट्रय पत्ता गर्ने एक जर्मन वैज्ञानिक। यो प्राचीन अध्ययन गर्न थाले जसले पहिलो archaeologists अग्रगामी को छ। उहाँले 06.01.1822 वर्ष जन्म भएको थियो। मकर - एक Horoscope मा। सिरिया, इजिप्ट, प्यालेस्टाइन, ग्रीस र टर्की मा Reins उत्खनन। आफ्नो जीवनको लगभग आधा, हेनरी को Homeric epics को ऐतिहासिक महत्त्व देखाउने प्रयास भएको थियो। एक कल्पना तर वास्तविकता - उहाँले सबै घटनाहरू कविता मा वर्णन भनेर प्रमाणित गर्न खोजे।
नर्वेजियन anthropologist थोर Heyerdahl6अक्टोबर मा, सन् 1914 मा जन्म भएको थियो। उहाँले धेरै पुस्तकहरू लेखिएको छ। आफ्नो expeditions सधैं, उज्ज्वल वीर घटनाहरूको पूर्ण थिए। आफ्नो काम धेरै वैज्ञानिकहरूले बीचमा विवाद कारण, तर यो धेरै वृद्धि भएको छ संसारको मानिसहरूका पुरातन इतिहासको Tura को चासो धन्यवाद थियो।
त्यहाँ चिरपरिचित archaeologists र रूस छन्। यो समावेश बोरिस Piotrovsky, उहाँले 1908 मा जन्म भएको थियो। राशिफल - कुंभ। यो एक चिरपरिचित रूसी इतिहासकार-orientalist र शिक्षाविद् छ। उहाँले उत्तर काकेशस, Transcaucasia र मध्य एशिया को धेरै स्मारक खोज्नुभयो। पहिले नै 1949 मा उहाँले कुटिया को विज्ञान लागि उप निर्देशक नियुक्त गरियो।
वैज्ञानिकहरू, archaeologists 10 उत्खनन भेटिए जो विश्व, सबैभन्दा महत्वपूर्ण भेट्टाउनेछन् को बरामद गरेको छ:
Rosetta स्टोन, Rashid को गाउँमा नजिकै खोज। यो granodiorite (रक) को अभिलेखमा टोलेमी वी (मिश्रको राजा) सँग प्रतिनिधित्व गर्दछ। को अभिलेखमा मिश्रको hieroglyphics, ग्रीक र डेमोटिक बनेको छ।
Venera Milosskaya - प्राचीन ग्रीस को प्रसिद्ध मूर्ति। लेट Hellenistic अवधि। ग्रीक किसान Milos को द्वीप मा 1820 मा फेला परेन। तर पत्ता लगाउन र असफल गर्न मुर्ति हातमा।
Angkor Wat (मन्दिर शहर) - कम्बोडिया बौद्ध उल्लेखनीय स्मारक छ। यो मन्दिर एक जटिल अंश हो। यो 1861 मा फ्रान्सेली यात्री Anri Muo द्वारा खोलिएको थियो। शहर को नाम पछि सम्पूर्ण युग भनिन्थ्यो।
ट्रय, Ilion - को नजिकै प्रायद्वीप मा पुरानो शहर Dardanelles। ट्रय कविता लागि धेरै प्रसिद्ध भए। उत्खनन मा, 46 सांस्कृतिक तहहरू प्रकट पछि धेरै अवधि मा विभाजित।
Mycenae - दक्षिणी ग्रीस, Argolida मा प्राचीन शहर। यो ईजियन संस्कृति को सबै भन्दा ठूलो केन्द्र मानिन्छ। संग coining तरवार, छल्ले, सुन र चाँदीको वस्तुहरु, मास्क, प्लेट र डिस्क - धेरै tombs फेला परेन जो सम्पत्तिहरू थिए उत्खनन, समयमा।
Minoan सभ्यता Arturom Evansom पत्ता थियो - अंग्रेजी पुरातत्वविद्। यस दरबार र शहर भवनहरु को उत्खनन मा, cemeteries पाइएको छ। एक भन्दा चिरपरिचित भेट्टाउनेछन् को - अज्ञात भाषा विद्यार्थीमा inscriptions संग पत्थर डिस्क।
माचू पिचू - बासस्थान को इंकएक गढ शहर। म आफ्नो अमेरिकी विद्वान Hayram Bingem फेला परेन। यी सुरम्य भग्नावशेष - पत्थर निर्माण posleinkskogo को सबै भन्दा राम्रो उदाहरण को एक। स्मारक 200 फरक परिसर र भवन, मन्दिर र आवासीय संरचना, रक्षात्मक संरचना राखिएको।
Tutankhamun गरेको चिहान Luxor मा ब्रिटिश पुरातत्वविद् हावर्ड खानपानको प्रबन्ध गर्नु द्वारा खोज। चिहान नै एक अर्को भित्र नीडिंत थिए जो एक विशाल धन, आमा तीन coffins मा गाडे छ।
बर्च छाल - scratched र सन्टी छाल मा इम्बोस गरिएको। तिनीहरूले नोभगोरोड फेला पर्यो पहिलो पटक। र पहिले नै 2012 मा त्यहाँ एक हजार भन्दा बढी थिए।
साइबेरियन आइस पूर्व - पुरानो आमा मङ्गोलिया संग सिमाना मा, Altai मा Scythian दफन Mounds भेटिए। यसको उमेर - 2500 भन्दा बढी वर्ष।
साधारण देखि archaeologists के हुन्? त्यहाँ तार्किक असम्भव व्याख्या कि excavated कलाकृतिहरू को एक नम्बर हो। वैज्ञानिक समुदाय Acambaro तथ्याङ्कले सजग। पहिलो म मेक्सिको जर्मन Waldemar Julsrud भेटिए। यस तथ्याङ्कले प्राचीन मूल गरेको जस्तो देखिन्छ, तर यो वैज्ञानिकहरू बीच शंका धेरै कारण।
पत्थर ड्रप - प्राचीन सभ्यता को प्रतिध्वनिहरु। पत्थर डिस्क सयौं को अन्तरिक्ष यान को इतिहास कुँदिएका थिए जो गुफा, को भुइँमा फेला परेन। तिनीहरूले स्थापना जसको रहलपहल थिए गुफा फेला रन थियो।
पुरातत्व मा, त्यहाँ पनि केही राम्रो भयानक खोज हो। उदाहरणका लागि, आमा चिल्ला। यी मध्ये एक सीमाको हात र खुट्टा थियो, तर अनुहार मा चिल्ला उभिए। त्यहाँ उनले जिउँदै गाडिएको थियो, यातना कि, विष सुझाव गरिएको छ। तर अध्ययन एक गरिबी bandaged चिबुक कि देखाएका छन् वा सबै यो गरेन, त्यसैले आमा मुखबाट खुला थियो।
Archeologists विशाल नंग्रा र अज्ञात राक्षस पाएका छन्। र फेला एक खोपडी र चुच्चो विशाल एक राक्षस आफ्नो बाटो कसैले पनि पूरा भने, पर्याप्त सुखद छ कि वैज्ञानिकहरू मात्र विश्वस्त। तर पछि यो यो Moa चरा पुरातन पुर्खाहरूको थियो बाहिर गरियो। उनको वृद्धि 2-3 को मानव कारक नाघ्यो। यो यस चरा वर्तमान दिन बाँचे छ कि संभावना छ भने छ, र यो न्यूजील्याण्ड मा क्षेत्रहरु फेला पार्न प्रयास गर्न सम्भव छ। यो देश को निवासी Moa सम्बन्धित दन्त्यकथा धेरै।
संगीन, shovels र entrenching बेल्चा, विभिन्न आकार रुचि र: को उत्खनन मा उपकरण को मुख्य रूप यस प्रकारको प्रयोग गरिन्छ Hoes, बगैचा shovels, झाडू, स्लेज hammers, hammers र विभिन्न आकार को ब्रश। तपाईं ठूलो Mounds उत्खनन गर्न विशेष गरी जब पुरातत्वविद् काम, एकदम गाह्रो हुन सक्छ।
महत्वपूर्ण बिन्दु वस्तु सही सञ्चालन छ। र इच्छित उपकरण चयन गर्ने क्षमता पनि आवश्यक छ। को उत्खनन टाउको मात्र archaeologists को स्वास्थ्य निगरानी, तर पनि सही ब्रश र बेल्चा प्रयोग गर्न मद्दत गर्छ।
कसरी पुरातत्वविद् बन्न
सिक्न कसरी तपाईं पूर्ण-समय र पत्राचार गरेर गर्न सक्छन्। पुरातत्वविद् - प्राचीन र उत्खनन लागि झुकेको छ जो कोहीले खरिद गर्न सकिन्छ भनेर एक पेशा। यो गर्न, इतिहासकारहरूले गाडिहरु जो कलेज, जानुहोस्। यो टी.पी यो अनुशासन र त्यसपछि उत्खनन र निर्देशन बाँकी मा लगे सकिन्छ मा। पुरातत्वविद् - यो इतिहासकार छ। तथापि, उत्तरार्द्ध विपरीत, यो सिद्धान्त को अध्ययन, तर पनि आफ्नो खोजीहरू संग र प्राचीन पडताल मात्र होइन गर्नुहुन्छ।
औसतमा रूसी तलब लगभग 15 हजार छ। Rubles। तर एक यात्रा archeologist 30 हजार सम्म प्राप्त गर्न सक्छ। Rubles। विभिन्न शहर मा ज्याला फरक हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, मास्को, यो 20 30 हजार rubles देखि दायरा। यस क्षेत्रमा, यो 5-7 हजार कम अनुमान गरिएको छ।
ध्वनि मात्रा: विभिन्न निद्रामा ढाँचा र decibels
भौतिक मा समस्या कसरी समाधान गर्ने
आर्थिक प्रणाली। अवधारणा। प्रकार
अनुनाद तनाव। के अनुनाद सर्किट
प्रकाश को तितरबितर
VALERY Borchin। खेल मा जीवनी र क्यारियर
तपाईं जब एक अत्तर छनौट जान्नु आवश्यक के
ख्रीष्ट मुक्तिदाता (उद्धारक) को मुर्ति कहाँ छ?
व्यक्तित्व प्रकार: प्रकार, विशेषताहरु, अठोट को विधिहरू
पृथ्वीको bowels को विद्यार्थी। जियोलोजिकल अनुसन्धान को मुख्य निर्देशन
संचार उपकरण, इतिहास, तथ्य
"मेगा Teply Stan" को आगन्तुक मा प्रतीक्षा
Alizee: मृत्यु को मिति वास्तवमा एउटा काल्पनिक छ
फर्नीचर screed Eccentric प्रकार - फाइदा, बेफाइदा, वर्णन
एक चिरपरिचित टेलिभिजन पत्रकार तातियाना Mitkov
को पुच्छर चिकन: रोचक व्यञ्जनहरु
खेल मा संलग्न कारण। मानव जीवनमा खेल